top 8 Codsiga Best Mobile for Cryptoсurrency - Blockchain News
Haddii aad sooco waqti badan si ay u Ganacsi la crypto-lacagaha, markaas ma aad samayn karto oo aan codsiyada mobile. Waxaan soo ururiyay sideed ka mid ah codsiyada ugu haboon oo caan ah, oo waa inuu ahaado mid aad smartphone.
top 8 Codsiga ugu fiican Mobile for Cryptoсurrency
Halkan waxa aad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan isbedelka koorsada iyo lacag ay maal lacagta birta ah ididiilo. Waxaa ku filan si ay u dar liiska oo waxaad awoodi doontaa inaad si ay ula socdaan degidda Dabcan in ka badan ay noqon doontaa 2,000 qadaadiicda. Waxa ay taageertaa oo dhan is dhaafsi sarrifka ugu caansan, oo ay ku jiraan Coinbase, Bittrex, Bithumb, Poloniex, Binance, Coinone iyo Bitfinex.
app wuxuu ka shaqeeyaa on Android iyo IOC
Seeraar saxe kaloo ka caawisaa heerka sarrifka lacagta monitor. Ururinta Macluumaadka ka badan 80 is-weydaarsiga. In codsiga, aad dhigay karaan bareeg waqtiga marayo iyo farriimaha ku saabsan qiimaha updated la helay doonaa. Intaa waxaa dheer, aad reserved kartaa farriimaha codka.
app kaliya ee ka shaqeeya on Android
Earn.com – ganaax ah kaas oo aad ku kasban kartaa bitcoins for jawaabo in fariimaha iyo hawlaha. Waxay la sarifan karaa iyada oo ku-Seeraar kiishad ama sarrifka Coinbase ah. Laakiin waa xusid mudan in si ay u helaan lacag halkan la taaban karo, aad u baahan tahay in ay leeyihiin qaar ka mid ah miisaanka ee bulshada crypto iyo waxay leeyihiin waxgarasho wanaagsan ee mawduuca of lacagta crypto. Jawaabahaaga waxaa si gaar ah mahad doonaa haddii aad leedahay a account Twitter caan.
app wuxuu ka shaqeeyaa on Android iyo macruufka
Codsigan ayaa kuu sheegi doona oo ku saabsan warbaahinta iyo dadka alaabta iyo adeegyada iibin bitcoins meesha aad degan tahay. gudaha Waa maxay? map Interactive, Liiska cusub oo la warbaahinta u dhow, Liiska dukaamo jecel iyo calculator ah diinta Seeraar.
BitBuds qasaan waa nooc ka mid ah network bulshada beesha cryptocurrency ah. Hadafka horumarinta waa in ay midoobaan crypto-dunida ka adduunka oo dhan iyo in la abuuro madal wadahadal u. Sidaas halkan aad sameyn karto is-waxbarashada, weydiiso su'aalo, caawimaad dadka kale fahmi crypto-lacagaha, wada hadlaan dhibaatooyinka iyo saaxiibo cusub. In codsiga, waxaad gali kartaa sawiro iyo videos, abuuro CHAT, sameeyo waraaqo shakhsi iyo files sarrifka.
codsiga Gliph waa wax u eg Avito milkiilayaasha lacagta crypto. Users ka iibsan kartaa iyo iibiyaan badeecada iyo adeegyada bitcoins by si toos ah ula kasta oo kale oo lalana. Inside Gliph jiro nidaam Rasuulkiisa iyo bixinta ammaan, kaas oo aad ku samayn kartaa xawaalad gudaha codsiga laftiisa.
codsi si aad u ilaaliso account leh aqoonsi ah laba-factor. malaha, tani waa waxa ugu horeeya ee ah in la dhigay waa haddii aad jeebka ku xidhan yahay telefoonka. Codsiga abuuraa codes aan xidhiidhinaya internetka, taageeri karaan hawlwadeenada kala duwan iyo xisaabaadka iyo waxaa si toos ah loo qaybiyay isticmaalaya QR code-. Si aad ku dari xisaab isticmaalaya codes QR, aad u baahan tahay in la bixiyo codsiga in camera ah.
codsiga CoinPaper waxay muujinaysaa qiimaha ugu dambeeyay ee lacagta crypto ku saabsan asalka ah ee qalabka sida wallpaper a. Raaxadeeda waxa ay tahay in aad mar dambe uma baahan doonaan in la furo codsiyada gaarka ah oo keliya si aad u hubiso in qiimaha lacagta crypto. Wax walba, laga bilaabo nidaamka midab on qiyaasta waqtiga ay, si buuxda u configurable. Qiimaha la cusbooneysiiyaa daqiiqad kasta via API CryptoCompare ah.
TabTrader waa terminal bilaash ah Ganacsi lacag crypto on dhaafsi caan. ka mid ah Bitstamp, HitBtc, Huobi, Kraken, Bitfinex, Coinbase, Bittrex iyo kuwa kale. Kuu ogolaanayaa ganacsiga ee lammaane kala duwan ee lacagta crypto: Seeraar, Litecoin, Dogecoin, udhaqaajiyaa, Namecoin, Xiddigle, Etherium. Waxyaabaha kale, app uu leeyahay wararka ka Reddit, Coindesk iyo Seeraar Magazine.
jaangooyaha The Swiss horumariyo shuruudaha ICO
In xidhiidh la leh t ...
Dalka oo tartan rasmi ah ...